Izinhlelo zokusebenza eziphezulu eziyi-10 okumele zibe nazo ze-iPhone Photo Apps | Martech Zone
NgoMgqibelo, Novemba 17, 2012 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Angiyena umthwebuli zithombe omuhle futhi ukusebenzisa ikhamera yobungcweti kungaphezu kwekhanda lami, ngakho-ke ngikhohlisa kancane ngokusebenzisa i-iPhone yami nezinye izinhlelo zokusebenza engizithandayo. Kusuka kwisici sokumaketha, ukuhlinzeka isithombe ngqo emsebenzini esiwenzayo, izindawo esizivakashelayo, kanye nezimpilo esiziphilayo zengeza izinga lokubonisa obala ukuthi amakhasimende ethu nabalandeli bawajabulela.
Ukuzibandakanya nomphakathi wethu, izithombe beziyisihluthulelo. Ngingakhuthaza zonke izinkampani ukuthi zabelane ngezisebenzi zazo! Nakhu ukuphazamiseka kwezicelo zami ze-iPhone engizithandayo.
Yebo, ngiyazi ukuthi ikhamera iza ne-iOS kepha inketho yokuthatha isithombe se-panoramic iyamangalisa. Ukuthatha isithombe se-panoramic, chofoza inkinobho yezinketho lapho ikhamera yakho ivulekile. Lesi isithombe engisithathe ekhonsathini engiye kuyona muva nje.
Asikho esinye isicelo sesithombe esenza kube lula kakhulu ukwabelana ngezithombe emphakathini. Ngiyathanda ukuthi ngikwazi ukusunduza isithombe ngqo ku-Twitter, Facebook naku-Foursquare ngqo kusuka ku-Instagram kunokuzingela nokuthola izithombe nezinye izinhlelo zokusebenza. Amandla akhelwe ukufaka izihlungi nama-blurs angakwenza ubukeke njengochwepheshe!
Kunezici ezithile ikhamera eyisisekelo engavumeli ukuthi zithakazelise, njengokufaka isibali sikhathi nokuthatha isithombe. Ikhamera + inamathuluzi amangalisayo okusiza ukuthi uhlunge, ugxile futhi ungeze ukucaca ezithombeni ozithathayo, kanye namandla okuzilungisa. Kuyisethi yamathuluzi pro eyakhelwe amateur!
Ilensi yeGridi ikuvumela ukuthi uthathe amaqoqo ezithombe bese uzibeka ndawonye esithombeni esisodwa. Ungakhetha futhi wenze ngendlela oyifisayo ukwakheka, bese uthatha isithombe ngasinye ngokuchofoza khona lapho, bese ulondoloza, wabelana noma uthumele nge-imeyili umkhiqizo ophelile. Lokhu kwenza ukwabelana ngeqoqo elincane kube lula futhi kube lula!
IColorSplash ikuvumela ukuthi ususe umbala ezingxenyeni zesithombe osithathile. Uhlelo lokusebenza kulula kakhulu ukulusebenzisa - vele wandise isithombe bese uhudula umunwe wakho lapho ufuna ukusula khona umbala. Isithombe esiphelile singabonakala simangalisa ngempela - lena enye yendodana yami nentombi yakhe edansa.
Wake waba nesithombe esincenga amazwibela? Yilokho okwenzelwe i-Over… ukuhlinzeka ngesondo lokuzula elipholile impela elikuvumela ukuthi ungeze amagama-ncazo amahle kusithombe sakho ngemizuzu.
I-Snapseed inikeza izihlungi ezithokozisayo namathuluzi wokuhlela ajwayelekile wesithombe sakho. Izilawuli ezinomkhawulo ziyahlaba umxhwele futhi ukusetshenziswa kuhle kakhulu.
I-Blender yenza lokho ekushoyo… ivumela ikhono lokuhlanganisa izithombe eziningi ndawonye. Nayi inhlanganisela yeChicago… ushayela edolobheni ubheke phansi.
Inconywe ngu UNat Finn, Angibonanga nokuthi i-Aviary inezicelo ze-iOS. Okuxakayo ukuthi ngijabulela uhlelo lokusebenza lwe-iPhone kangcono kakhulu kunenguqulo yewebhu! I-Aviary inethoni yezici, kepha futhi inayo stickers engasetshenziselwa ukwengeza ama-callout (noma amadevu) esithombeni sakho.
Photoshop Express ye-iPhone
Esinye isincomo esivela kuNat nesinye obekufanele ngabe ngiyifakile… Photoshop Express. Ukuhlelwa kobungcweti ongakufeza nge-Photoshop Express kungahle kutholakale kwamanye amathuluzi angenhla, kepha ukusebenziseka kalula kuyamangalisa. Ngeza izihlungi, ozimele nemiphumela kokuthe xaxa futhi uthole uhlelo oluhle kakhulu lokuhlela isithombe.
Unazo ezinye izinhlelo zokusebenza ze-iPhone okuhle ukuzisebenzisa?
Tags: blenderikhamera +imibalailensi yegridiisithombeizithombeiphonephezuIzithombeisithombei-snapseed
Ungawakha Kanjani Umkhiqizo Wakho Ku-inthanethi
Nov 17, 2012 ngo-1: 56 PM
Izinyoni zezindiza. Konke kumayelana nomenzi we-meme. Futhi inamathuluzi wokufiphaza nawokuthinta kabusha kodwa into yangempela ngawo ukuthi inokubumbana. I-Facebook, i-twitter, i-flicker… ngasikhathi sinye. Cishe kupholile njengama-Instagram
Manje, abokuqala kulabo abangivumela ukuba ngihlanganyele kumakhasi e-Facebook ad google plus WINS!
Nov 17, 2012 ngo-2: 09 PM
Kuhle! Angizange ngiqaphele ukuthi babenohlelo lokusebenza lweselula!
Nov 18, 2012 ngo-3: 10 AM
yebo. kuhle impela. Uhlelo lokusebenza olukhokhelwayo, kepha kumenzi we-meme nokufakwa kombhalo bekuyigugu. Futhi i-Photoshop Express ne-InstaPicFrame obekulungile. I-Aviary ibe nokwabelana okuhle kakhulu.
Dec 29, 2012 ngo-10: 40 PM
Bheka uhlelo lwethu olusha lwe-iPhoneography, iHipsta Hipster Cam ku http://www.hipster-camera.com Sicabanga ukuthi sine-twist enhle kuhlelo lokusebenza olujwayelekile lokuthatha izithombe nge-iphone ngokuba nezihlungi zoqobo ezingenamkhawulo ezenziwa endizeni.
Mar 11, 2013 ku-1: 16 PM
Ngicabanga ukuthi umbhali ukhohliwe ukufaka i-'Zitrr Camera '. Ngicabanga ukuthi kungcono kakhulu kunekhamera + noma i-Instagram… futhi, ezinye izinhlelo zokusebenza lapha azizinhle kangako: /
Ngo-Apr 4, i-2013 ku-2: 49 AM
Izinhlelo zokusebenza ezinhle! Kepha kufanele futhi uhlole i-Auto Colourize Pro
Jan 2, 2014 ku-3: 05 AM
Izinhlelo Zokuhlela Eziphezulu ze-iPad Photo-Editing !!! I-Instafusion yizinhlelo zokusebenza ezihle kakhulu zokuhlela isithombe nezinhlelo zokusebenza ezimangazayo zokuhlela izithombe ku-iPhone !!!
Feb 26, 2014 ngo-6: 46 AM
engikuthandayo uhlelo lokusebenza lwe-instafusion
Ngo-Apr 6, i-2015 ku-8: i-50 PM
Wake wayibona i-Sweet Pix okwamanje! Umbono opholile impela.